I-Apartment Hiadeľ itholakala edolobhaneni laseHiadel cishe amakhilomitha angama-20 ukusuka edolobheni laseBanská Bystrica endaweni enhle ye-Low Tatras. Lesi sakhiwo sitholakala emagcekeni endlu yamasiko endawo lapho inendawo yayo egciniwe enezindawo zokupaka zamahhala eduze.
Ukwakhiwa kabusha kwaleli fulethi kwakusho ikakhulukazi ukunethezeka nokwaneliseka kwezivakashi, ngakho sazama ukulungisa indawo yokuhlala ngendlela yokuthi izivakashi zibe nokunethezeka okukhulu, ngakolunye uhlangothi umuzwa wokuba ngasese. Sicabanga ukuthi indawo yethu yokuhlala iyisixazululo esifanele sokuhlala kwakho. Indawo yokuhlala inenethiwekhi ye-wifi kanye ne-plasma TV enezinhlelo eziningi.
Eduze kwendawo yokuhlala izivakashi zingasebenzisa indlela yokufundisa yezokuvakasha. Kubathandi bemvelo kukhona ithuba lokuhamba ngezinyawo unqamule i-Hiadelské ihhashi ukuya ePrašivou, nakwezinye. Endleleni eya kuhhashi le-Hiadel ungama futhi ubuke isiphethu samaminerali sase-Hiadelská Kysla futhi uphumule esikhumbuzweni esingaphansi kwe-Javorí (itshe lesikhumbuzo kusukela ngeMpi Yezwe Yesibili) izivakashi ezisendleleni. Maduzane nedolobhana, izivakashi zingavakashela idolobhana laseKalište - isikhumbuzo samasiko kazwelonke (idolobhana elishisiwe phakathi neMpi Yezwe II), futhi umnyuziyamu wokushushuluza etholakala edolobhaneni eliseduze lasePodkonice (iqoqo le-skis endala eSlovakia), inqaba yase-Ľupča , eyasungulwa ngekhulu le-13. Izivakashi zingaphinde zivakashele igumbi lesikhumbuzo edolobhaneni lasePovraznik. Kubathandi be-adrenaline kukhona ithuba lokuntanta umfula omude kunawo wonke e-Slovakia Hron kusukela ekuqaleni kwedolobhana i-Lučatín. Edolobheni elikude eliseduze, ungavakashela i-Slovak National Uprising Museum e-Banská Bystrica, isikhungo sezitolo i-Europa Shopping Center, uphumule ngezinsuku ezishisayo endaweni yokugeza yase-Banská Bystrica, noma ujabulele ubhiya omnandi endaweni yokudlela yase-Barbakan. Eduze nesakhiwo (cishe amakhilomitha angu-4) kunendawo yokudlela enkulu i-Grajciar lapho izivakashi zingadla khona nsuku zonke kusukela ngo-11:00 ekuseni kuya ku-22:00 ntambama.
Nginikeza izihambeli indawo kodwa ngiyatholakala uma kunesidingo.